संस्थागत विद्यालय,राज्य र नागरिकको दायित्व
Sunday, 28 Feb, 2016 2:41 PM
नेपालमा संस्थागत विद्यालय र सरकारको बिचमा लामो समयदेखि दोहरी चलीरहेको छ । कहिल्यै तिव्र र कहिल्यै मथ्थर भएर चल्ने यो दोहरीको तिव्रताले संस्थागत विद्यालयका सञ्चालकहरुलाई समय–समयमा महाभुकम्प ल्याउने गर्छ । कानुनी रुपमा सरकारका केही नीतिगत अस्पष्टता अनी संस्थागत विद्यँलयका कहिकतै देखिने लापरवाही यो विषयका पाटा भएतापनि सरकारको अनुगमन प्रणालीमा देखिएको कमजोरी नै यसको मुख्य कारक हुनसक्छ ।
नीति निर्माताले आफ्नो व्याक्तिगत लाभ हेरेर नियम बनाउनु अनी कार्यान्वयनकर्ताले संस्थागत विद्यालयलाई आफ्नो बिना लगानीको दुहुन गाइ बनाउन खोज्नुले यो विषय तात्ने र सेलाउने गर्छ । वैज्ञानिक ढङले नीति निर्माण गर्नु र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउनु सरकारको दायित्व हो भने देशको प्रचलित कानुनको अक्षारंश पालना गर्नु त्यस देशका सम्पुर्ण नागरिकको कर्तव्य हो ।
– गणेश प्रसाद खतीवडा
कमजोरी यहि छ र यो कमजोरी दुवै पक्षबाट भएको छ । वर्षौदेखि लागु नगरिएको कुराहरु एकैचोटी कार्यान्वय गराउन खोज्ने सरकार र वेवास्ता गर्दै आएका विषयलाई नीरन्तरता दिने मनसायमा निजी क्षेत्र रहने हो भने यसले समाधानको साटो समस्यामात्रै निम्त्याउछ । क्रमिक रुपमा लागु गराउने र पालना गर्ने मध्यमार्गी बाटो खोज्ने हो भने केही समयको अन्तरालमा शर्प पनि मर्ने र लाठी पनि नभाचिने अवस्था आउन सक्छ ।
देशमा आएको विनासकारी भुकम्प अनी भारतले लगाएको नाकाबन्दी पश्चिात उब्जीएको समस्याको सामाधानमा भएको देशका ठेकेदाहरुको उदासिनता पछि संस्थागत विद्यालयलाई भारतको अप्रत्यक्ष सहयोगमा सरकार तथा कर्मचारीतन्त्र नै बन्द गराउदै नेपाली विद्यार्थीहरु भारततर्फ गएर पढ्न वाध्उ बनाउने खेलमा लागेका त होइनन भन्ने शंका गर्ने अवस्था देखिदैछ । यदि जिम्मेवार पक्ष नै यसरी कालोबजारी र कमीसनको खेलमा लाग्न उत्सुक हुने हो भने शिक्षा क्षेत्र मात्रै होइन सिङगो देशको अस्तीत्व नै संकटमा पर्न सक्छ ।
नेपालको शिक्षा विकासको लागि निजि क्षेत्रको अत्यन्त महत्वपुर्ण भुमिका रहेका कुरा छर्लङ्ग छ । शिक्षाकै नाममा वर्षेनी वाहिरीने ठुलो रकमलाई रोक्नेदेखि उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान गर्न संस्थागत विद्यालय सफल छन । देश तथा विदेशमा दक्ष कामदारको रुपमा बिक्न सक्ने सक्षम जनशक्ति संस्थागत विद्यालयले उत्पादन गरेका छन् ।
विप्रेषणको भारमा चलेको मुलुकमा विप्रेसन भित्र्याउन सहयोग गर्ने संस्थालाई कसरी नराम्रो रुपमा लिनु ? बेरोजगारले भरिएको ठाउमा हजारौ मानिसलाई रोजगारी दिनु पनि त पुण्यकर्म नै हो । संस्थागत विद्यालयमा बारम्बार उठीरह्ने प्रश्न भनेको उनीहरुले उठाउने शुल्क नै हो । सरकारले सामुदायिक विद्यँलयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुमाथी गरेको प्रतिलगानी संग तुलना गरेरै हेर्ने हो भने संस्थागत विद्यालयले उठाएको शुल्क न्युन नै हुनजान्छ ।
मासिक रु १ सयदेखि १ लाखको हाराहारीमा शुल्क उठाउने विद्यालयहरु उपलब्ध भएको ठाउमा त्यसलाई महंगो भन्ने कि सस्तो ? मानिसहरुले आफ्नो इच्छा,चाहना र क्षमताअनुसारको विद्यालय रोज्न पाउनु पनि त प्रजातान्त्रिक अधिकार नै हुनजाला । सफा कपडा र टाइ भिरेर हिड्दैमा उसले महंगो शुल्क उठाएर धनि वन्यो भन्ने सोच्नु मुर्खता सिवाय अरु केही होला र ?
देशको प्रचलित कानुनभन्दा माथी कोही हुदैन् । सरकारी निकायले कानुनको कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्नुपर्छ । मानवीय दृष्टिले उचित लाग्ने काम कसैले गर्छ भने कानुनी दायरा फराकीलो वनाएर उसलाई सहयोग गर्नु न्यायोचित हो । कानुनलाई उचित ढङगले पालना गरेर राज्यलाई सहयोग गर्नु हामी सवैको दायित्व वा कर्तव्य हो । त्यसैले सरकार र संस्थागत विद्यालय दुवैले आ–आफ्नो कमजोरी भए सच्याउदै दिर्घकालीन समाधानको बाटो पहिल्याउनु नै आजको आवश्यकता हो ।